ခန္ဓာကိုယ်မှာရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာ အစိတ်အပိုင်းနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ။
Swine Flu H1N1 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့မော်လီကျူးဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်ပုံ ။
ဟော ... ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲမှာ ရောဂါတွေ ပိုးတွေလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ ပြီး လူတွေကို ဒုက္ခ အမျိုးမျိုးပေးနေကြပြန်ုပြီနော် ... ဝက်တုပ်ကွေးတဲ့ ဗျို့ ။
ဗမာပြည်က တချို့ လူတွေ ကတော့ ဝက်သားဈေးကျမဲ့ အရေး တွေးမျှော်ပြီး ပျော်ရင်တောင် ပျော်နေကြ အုံးမယ်ထင်ပါရဲ့။ ဘာကြောက်စရာမှမရှိတာနော် ။ အဲဒီ ဝက်ကို ဆူအောင် ကျက်အောင် ချက်ရင် ဒီဝက်သားမှ နေပြီး ရောဂါ ကူးစက်နိုင်မှာမှ မဟုတ်တာကြီးကို။ မီးအပူချိန် ၈0 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ နာရီဝက် ဆူအောင်ချက်ရင် ဒီ ဝက်ထဲ က ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးလဲ မရှင်နေနိုင်ပါဘူးလေ ။
ဒါပေမဲ့ဒီအကောင်တွေက နေ လူတွေကို တခြားနည်းတွေနဲ့ ကူးစက် ပြီး နောက် လူ မှ လူ အချင်းချင်း ရောဂါ ပျံ့ စေတော့ မှ ၊ လူတွေ သေကြမှ ဘဲ အားလုံးကြောက်ကုန်ကြတာပေါ့ ။
ခုတလော အရေးပေါ်သတင်းတွေ အပြိုင်ထုတ်လွှင့်နေကြတာ ။ အမိ မြန်မာပြည်ကြီးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း မသိသလို ။ မဆိုင်သလို နေ ကြမှာ မြင်ယောင်နေမိပါတယ် ။
၀က်တုပ်ကွေးကူးစက်မှု သတိပေးအဆင့် WHO တိုးမြှင့်
အသေအပျောက်များလှတဲ့ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်က ကမ္ဘာနဲ့ချီ ပျံ့နှံ့နိုင်ခြေရှိတဲ့အဆင့်ကို သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းက လူစုလူဝေးအဆင့်နဲ့ လူလူချင်း ကူးစက်နိုင်တဲ့အဆင့်ထက် ကျော်လွန်သွားကြောင်း အရိပ်လက္ခဏာ ပြလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရောဂါပျံ့နှံ့မှု အဆင့် ၆ ဆင့်ရှိတဲ့အထဲ အခု အဆင့် ၃ ကနေ အဆင့် ၄ ကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်က မြှင့်တင်လိုက်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာနဲ့အ၀န်း ပျံ့နှံ့မှုအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ ၂ ဆင့်ပဲလိုတော့တယ်လို့ တနင်္လာနေ့မှာ WHO တာဝန်ခံများက ရှင်းလင်းပြောကြားကြပါတယ်။
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် လူ ၁၄၉ ယောက် သေဆုံးပြီး တခြား၁,၆၀၀ ကျော် ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်နေကြလို့ WHO က အဲဒီလို အဆင့်မြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံအနှံ့ ပျံ့နှံ့နေနိုင်လို့ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကို ခရီးသွားလာမှု မပြုလုပ်ဖို့ ဆက်လက်သတိပေးသွားမယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံအမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဂျဲနက် နပိုလီတန်နို(Janet Napolitano) က ဆိုလိုက်ပြီးနောက်WHO က အဲဒီလိုကြေညာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မက္ကဆီကိုက တာဝန်ခံများနဲ့ မပြတ်ဆက်သွယ်နေကြောင်း အမေရိကန်ဝန်ကြီးကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ
၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ၄၀၊ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ရောဂါဖြစ်သူ ၆ ယောက်၊စပိန်နိုင်ငံမှာ ၁ ယောက်ရှိကြောင်းတနင်္လာနေ့မှာ အသီးသီး ကြေညာပါတယ်။
နယူးဇီလန်၊ ပြင်သစ်၊ အစ္စရေးလ်နဲ့ စကော့တလန်တို့မှာလည်း ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါလို့ မသင်္ကာရတဲ့လူနာများ တွေ့ရပြီး အဲဒီထဲက လူတချို့ကတော့ မကြာသေးခင်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံက ပြန်လာကြသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သတင်းအပြည့်အစုံကို အောက်ပါ လင့်ခ်များမှာ ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနဲ့ မက္ကဆီကို နိုင်ငံတွေမှာ ၀က်တွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတမျိုးကနေ Swine Flu တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားတာတွေ လူတွေမှာ စမ်းသပ်တွေ့ရှိရပြီးတဲ့နောက် ဒီရောဂါကူးစက်မှုတွေ ရှိလာမှာ စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်း WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကမ္ဘာအဝှမ်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က လူထောင်ပေါင်းများစွာ သေကျေပျက်စီးစေခဲ့ တဲ့SARS နဲ့ အလားတူ အဖြစ်မျိုးတွေ မကြုံရလေအောင် နိုင်ငံ အသီးသီးမှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့ တွေ တပ်လှန့် ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို အပြင်းအထန် လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ( မြန်မာပြည်မှ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးလည်း အိပ်မောကျမနေစေဖို့ မျှော်လင့်နေမိပါတယ်)
ဒီတော့ ဒီ ဝက်တုပ်ကွေးဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ဘယ်လို ပြန့် နှံ့ တတ်သလဲ ၊ ဘယ်လိုရောဂါ လက္ခဏာတွေရှိတတ်လဲ။ ဘယ်လို ကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုကုသရမလဲ ဆိုတာတွေကို အတို ချုပ်ပြောပြချင်ပါတယ်
ကြက်ငှက် ဝက် ခွေး နွား မြင်း လူ စသဖြင့် ရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ အမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး Bird Flu ,ှSwine Flu, Dog Flu , Horse Flu ,Human Flu ဆိုပြီး ခေါ်ဆိုကြပါတယ် ။ Flu ဆိုတာ Influenza ကို အတိုကောက်သုံးစွဲနေကြတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ ရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက တရားခံ ကတော့ Orthomyxoviridae Influenza ဆိုတဲ့ Virus တမျိုးပါဘဲ ။
ဒီ Virus ရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ မှာ single strand RNA ပါ ။ စိတ်ဝင်တစားအသေးစိတ်သိလိုရင် http://en.wikipedia.org/wiki/H5N1_genetic_structure မှာ ဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
တနှစ် နဲ့တနှစ် ဖြစ်တဲ့subtype မျိုးခွဲ တွေ ဟာ မတူကြပါဘူး ။နေရာဒေသလည်း ကွဲပြားကြပါတယ်ဒီနှစ် ဖြစ်တဲ့Swine Flu ဝက်တုပ်ကွေး ဟာ H1N1 Virus အမျိုးအစားကြောင့်ပါ ။ မနှစ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ငှက်တုပ်ကွေးကတော့ H5N1 ကြောင့်ပေါ့ ။
ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ တုပ်ကွေးမှာတွေ့ ရတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ နှာစေးမယ် ။ ချောင်းအနဲငယ်ဆိုးမယ် ။ တကိုယ်လုံး ကိုက်ခဲပြီး မအီမသာ ဖြစ်မယ် ။ လည်ချောင်းအနဲငယ်နာမယ် ။ အစားအသောက်ပျက်မယ် ။ပျို့အန် မယ် ၊တခါတလေ ဝမ်းလျောတတ်တယ် ။အန်တတ်တယ်။ အဖျားလဲ ရှိတတ်တယ် ။ ဒီထက်ပိုဆိုးလာရင်တော့ နမိုးနီးယား အဆုပ်ရောင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ပေးတတ်ပါတယ်။
ရောဂါပြန့် နှံ့ ပုံ ။ ကာကွယ်ပုံ ။
သူတို့ က အဆက်အစပ်ရှိ နေလို့အတူတကွတွဲပြီး ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ရောဂါ ဖြစ်နေတဲ့ဝက်တွေရဲ့ကိုယ်တွင်းအရည်များ၊ တံတွေး ။အချွဲ ။ မစင် ။ ကျင်ငယ် တို့ မှာ အဲဒီ ပိုးကောင်တွေ ပါနေတတ်လို့၊ သူတို့ကို ကိုင်တွယ်မိပြီး လက်ကို သေချာ မဆေးကြောရင် ရောဂါရတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ အစာမစားခင် လက်ကို သေချာ စင်ကြယ်အောင် ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးကြော သင့်ပါတယ် ။
ပြီးတော့ ရောဂါ ဖြစ်နေတဲ့ လူ မှာ နှာချေလိုက်ရင် လေမှ တဆင့်အခြားသူ တဦးရဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းထဲ ပိုးကောင် ပျံ့ နှံ့ သွားနှိင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လူအများစုဝေးပြီး လေဝင်လေထွက် မကောင်းတဲ့ နေရာမျိုးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ် ။ မသွားလို့ မဖြစ်ရင်တော့ လူတွေကြားမှာရှိရင် နာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်တွေကို ဖုံးအုပ်ထားသင့်ပါတယ်.။ Mask တပ် ထားကြပါ ။ ချောင်းဆိုးနေတဲ့ သူ ကလည်း ကိုယ့် ပိုးတွေ သူများဆီ မရောက်အောင် အသိကောင်း စိတ်ကောင်းလေး ထားတတ်ကြဖို့လိုပါတယ် ။ Mask လေးတပ်ကြပေါ့နော် ။
ဝက်သား စားလို့ဝက်တုပ်ကွေးဖြစ်တာ မဟုတ်ပါ ။ဝက်သားကို သေချာသန့် စင်ပြီး ကျက်အောင်ချက် ( မီးအပူချိန် 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ မိနစ် ၃၀ ချက်ပြုတ် ပြီးမှစားရင် ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူး.. ကိုင်တွယ်ပြီး လက်ကို စင်ကြယ်စွာဆေးကြော ဖို့ သာ အဓိကပါ ။ခု ကူးစက်နေကြတာက လူမှ လူသို့ကူးစက်နေကြခြင်း ပါ။ Droplet Infection ,Direct Contact Transmission ပေါ့ .။ ရောဂါ ဖြစ်နေတဲ့ လူရဲ့အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနဲ့အစာလမ်းကြောင်းမှ ထွက်တဲ့ အရည်များမှာ ပါရှိနေတဲ့ ပိုးတွေ မှ လေထုထဲရောက်ပြီး၊ သို့ မဟုတ် ဒါရိုက် ထိတွေ့ ပြီး နောက် ထပ် လူ တယောက် ကို ကူးစက် ပြန့် နှံ့ကြတာ ပါ။
ဒီလို ဂရုစိုက် နေလို့ မှ နေထိုင် မကောင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန် ဆွဲ မနေဘဲ ဆေးရုံသွားပြီး တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့ကုသမှု ကို ခံယူသင့်ပါတယ် ။ဒီရောဂါက အချိန် မှီ ကုသရင် လုံးဝ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ် ။ အခြေအနေ မဆိုးသေးခင်မှာပေ့ါနော် ။
ဒီ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကို သတ်နှိင်တဲ့ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ဆေးဝါးတွေလည်း ပေါ်ပေါက်နေပါပြီ ။
(The swine flu is susceptible to four drugs licensed in the United States, amantadine, rimantadine, oseltamivir and zanamivir, however, for the 2009 outbreak it is recommended it be treated with oseltamivir and zanamivir.)
Neuraminidase အုပ်စုဝင်တွေထဲမှ ဒီ ဆေး ၂မျိုး oseltamivir and zanamivir က ဒီနှစ်အတွက် Swine Flu H1N1 Virus ကို သေစေတဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်တဲ့ ။ နောက် ဆေးတမျိုး Peramivir ကိုလည်း သုံးနိုင်တဲ့ အကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ကျန်တာတွေကတော့ Symptomatic Treatment ခေါ်တဲ့ ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာ အလိုက်ကုသမှုပေးရတာတွေပေါ့နော်။
အဖျားရှိနေရင် အဖျားကျဆေးပေးရတာမျိုး ၊ ချောင်းဆိုးနေရင်ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးပေးရတာမျိုး အစရှိသဖြင့်ပေါ့။
နှစ်တိုင်းထိုးနေကျဖြစ်တဲ့တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး Vaccination တွေကိုလည်း အချိန်မှန်ထိုးထားခြင်းဖြင့်HumanFlu ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒီနှစ်အတွက် ထိုးရတဲ့ ဆေးကတော့ ခုဖြစ်နေကြတဲ့ H1N1 Swine Flu အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ ပြောကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့လာမဲ့အောက်တိုဘာ ၊ နိုဝင်ဘာ လ လောက်မှာ လူတုပ်ကွေးတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်နိူင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေက တွက်ဆထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုက အရေးကြီးပါတယ်။
ကမ္ဘာလူသားအားလုံး ဝက်တုပ်ကွေးတွေနဲ့ ဝေးနေနိုင်ကြပါစေ ။။။
:kiki : at 4/28/2009 01:22:00 PM
လေးဆူဓါတ်ပုံ မြတ်ရွှေဂုံ ရှိ ၊ ရှေးစဉ်လာမှာ ကမ္ဘာသိတာ
ရဲန်ဂွန်း , ဘားမား ( Rangoon ,Burma ) အာရှမှာ စတားပေါ့ ။
ရွှေ့ လျားပြောင်းလဲ မမြဲခြင်းတရားက ၊ရွှေပြည်မြန်မာ အခါတော်ပေးတာမို့ 
မြို့ ရန်ကုန် တဆင့်လျှောကာကျ နေပြည်တော်ဟာ ပထမတဲ့ဗျ ။
ဒါနဲ့ တင်အားမရ ကြီးကြီးမားမား ရုံးကန္တားတွေပါ ရွှေ့ ကာသွားလို့ 
အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်ရ ၊ ဟိုဖုံတောမှာ တော်သလိုနေရပေါ့ ၊
ရွှေဂုံသူတွေ မပျော်နိုင်ပေဘူး... မျှော်လေတိုင်းဝေး ။
ရွှေရန်ကုန် အသွင်ပြောင်းပြီမို့မာကျူရီမီးလည်း မထိန်ညီးနိုင်တော့
နွေခါမှာ ရေဆိုတာ ရှာမှရှား ၊နေပူ လေပူ ဖုံထူထူထဲ ခါးစီးပြီးတင်းခံပေါ့။
ထမင်းမှန်နေတဲ့ တတ်နိုင်သူ တချို့ တလေတော့ ဂျင်နရေတာတွေလှိုင်လှိုင်သုံးလို့ 
တဝုန်းဝုန်းနဲ့မြို့ ထဲမှာ ဆူညံလှ အဲဒါ ရန်ကုန်တဲ့ဗျ ။
စည်ပင်မှာအမြင်မကြည်ကြတာကြောင့် မြူနီခွန် ကောက်ရုံကောက်
အမှိုက်ပုံ မရှင်းလင်း မိုးတွင်းဆို မြောင်းတွေပိတ်သမို့ 
ရေကြီးအလာမှာ လှေစီးကာ ခရီးဆင့် ရတယ်လို့ 
တခေတ်တခါဆန်းလှပါတဲ့ဒို့ ပို့ ဆက်စခန်း ။
ဒို့ ပြည်သူတွေ သိပ်ပ်ီကြပါသဗျို့ ၊လိုင်းပေါင်းစုံ ဘတ်စ်ကား ဒတ်ဆန်းများတောင်မချန်၊
ပစ်ကပ် နောက်ဖွင့် အဆင့်ဆင့်မှာ၊ ထိုင်စရာခုံမရှိ တာမို့ 
တို့ လို့ တွဲလောင်း လူမြင်မကောင်းအောင်
လေမှာပျံဝဲခက်ခဲစွာ ဒီခရီးကို ဒုက္ခခံစီးမှ ရောက်ရမှာမို့ 
မျက်စိစုံမှိတ် အံကိုကြိတ်၍ သရဏဂုံ အစုံစုံရွတ် လက်မလွှတ်ရဲ တန်းကိုကိုင်ဆွဲ ၊
ကြပ်ကြပ်သပ်သပ် အထပ်ထပ် နဲ့ဆပ်ကပ်ပြပွဲတမျှ
လိုရာအရပ် ရောက်ပါမှဘဲ သက်ပြင်းကို အခါခါချ
ရုန်းပေအုံးပေါ့ တနေ့ ဒူဝ ၊
တခါတလေ ကားခတောင်မကျေသမို့ဝမ်းတထွာမှာ ဟာတာတာဖြစ်ရတာမနည်း
ဗေဒါမှန် အံကိုခဲပါလို့ပန်းတိုင်နဲ့ လွဲ။
ကတ္တရာ နိုင်လွန်လမ်း ဘယ်လောက်ပင်ခိုင်ချင်ပေမင့်
ပျက်အစဉ် ပြင်သော်လည်းမကောင်း ဇရာပါထောင်းလို့ 
ဂျိုင့်တွင်းတွေ အစုံပေမို့လကမ္ဘာပြင် ဆင်းသလိုထင်မိရ
စက်အင်ဂျင် တွေဂျုံးဂျုံးကျတာက ဒီဇယ် ဓါတ်ဆီ သုံးမိတာ အရောနှောတွေမို့ 
ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတယ်လို့မထင်ကြပါစေချင်
လှည်းယာဉ်နှင့် ခရီးတွင်ကြဖို့ သာ ပြင်ဆင် ။
ခေတ်နဲ့အပြိုင် တိုးတက်တဲ့ ဆိုင်တွေလည်းရှိပါ့ ၊
စည်ဘီယာ စိုပြေစွာ နဲ့ကာရာအိုကေ အပျိုတွေ ပန်းကုံးစွပ်တဲ့ 
စားသောက်ဆိုင် အများအပြား ဘယ်လိုလူတွေ စည်ကားနေကြပါလိမ့် ၊
ငွေကိုရေလို သုံးနေကြသူ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားဆိုသူများလည်း
အံ့သြလောက်ဘွယ် ရှိသေးတယ်တဲ့ ။
ဘဝအမှန်နေတဲ့ဒို့့ပြည်သူတွေ ဝဋ်ခံဆင်းရဲ ဖွတ်သထက်မွဲလေရ
တိုးချဲ့ တဲ့ မြို့ သစ်အစွန်ဖျားမှာ မီးမလာ ရေမရှိ မှောင်အတိနဲ့ ၊
ရေကြီးပြီးဓါတ်လိုက် ၊ အိမ်ထဲမှာ မြွေကိုက်တာတောင်ရှိရပေတဲ့
ပုံပြင်လို့ တောင် ထင်ချင်တော့ပါဘူး
မထူးဆန်းလှတဲ့ ဘဝပေး ဇာတ်လေးတွေကို ရေးမိသူမှာသာ.. ..အရူး ။
( ရန်ကုန် ရွှေ မြို့ တော်ကြီးသို့တခါတခေါက်ပြန်ရောက်စဉ်က အားမလို အားမရ နဲ့ရော ။ ဝမ်းနည်းစိတ်ပျက် ပြီးတော့ရော ခံစားမိတဲ့ အကြောင်းလေးတွေပါ ။ နှိမ့်ချစော်ကားပြောလို စိတ်အလျှဉ်းမပါရှိပါကြောင်း )
:kiki : at 4/25/2009 04:53:00 PM
အပြစ်မဲ့တဲ့ ၁၀ လသမီးလေး 黃小妹 ။
လူမဆန်တဲ့ အဖေ ၊ အချုပ်ခန်းသို့အသွား။
အသည်းအသန်ခန်းထဲမှာ ပြုစု ကုသနေကြစဉ်။
ကံဆိုးရှာတဲ့ သမီးလေးရဲ့နောက်ဆုံး ခရီး ။
ဒီနေ့ နေ့ လည် ထမင်းစားချိန် သတင်းဖွင့်ကြည့်တော့ စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းလေးတပုဒ်မြင်ရ ကြားလိုက်ရပြန်ပါတယ်။
ကြားရတာ နားဝ မသက်သာလိုက်တာ ။ ဒီလူ့ ပြည် လူ့ လောကကြီးလဲ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြန်တာလဲနော် ။
Chang Hwa မြို့ လေးမှာ ဒီလ ၁၈ ရက်နေ့ က ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးက ဒီလိုပါ ။ အဲဒီ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန် ၊အရက်မူးနေတဲ့ အဖေ က အမေ နဲ့ ရန်ဖြစ်တယ်တဲ့။ သူတို့ လင်မယားက ခေါက်ဆွဲဆိုင် ဖွင့်တယ် ။ ဒီတော့ ခေါက်ဆွဲ ပြုတ်တဲ့ အိုးကြီးတွေ။ ဟင်းရည် တည်တဲ့ အိုးကြီးတွေမှာ က ရေပူကို အဆက်မပြတ် တည်ထားရတာလေ ။ ရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန် အမေလုပ်သူ က အဖေ လုပ်သူကို မခံချင်အောင် ပြောတယ်ပေါ့ ။ နင် အစွမ်းအစရှိရင်၊ သတ္တိ ရှိရင် ဒီကလေးကို အဲဒီအိုးထဲ ပစ်ထဲ့လိုက်ပါလားတဲ့ ။ ဒီတော့ အရက်မူး လူစိတ်ပျောက်နေတဲ့ အဖေလုပ်သူက တကယ်ဘဲ ဒီ ၁၀ လ သမီးလေး 黃小妹 ကို ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေအိုးကြီးထဲ ပစ်ချလိုက်ပါတယ် ။
ဒီတော့ မှ အမေလုပ်သူက မျက်လုံးပြူး မျက်ဆန်ပြာ နဲ့ကလေးကို ရေနွေးအိုးထဲက ကမန်းကတန်း ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပေမဲ့အချိန်နှောင်းသွားခဲ့ပါပြီ ။ ကလေးကို အရေးပေါ်ကားနဲ့ဆေးရုံကို ပို့ ခဲ့ပါတယ် (彰化基督教醫院)ခရိယန်ဆေးရုံသို့ ပို့ခဲ့တာပါ ။ ဒီကလေး ဟာ တကိုယ်လုံးရဲ့၈၄ ရာခိုင်နှုန်း တတိယ အဆင့် အပူလောင်ကျွမ်းခြင်း [ 84% BSA,(Body SurfaceArea), 3rd degree burn ] ဒါဏ်ရာ ကြီးမား ပြင်းထန်စွာ ရရှိသွားလို့အသည်းအသန် ခန်း (Intensive Care Unit ) မှာ သေမင်းနဲ့ အပြိုင် စစ်ခင်းခဲ့ ရပါတယ် ။
နောက်ဆုံးတော့လည်း ကံကြမ္မာ က သူ့ ကို မျက်နှာသာ မပေးခဲ့ ပါဘူး။ ၄ ရက်မြောက် နေ့ဒီနေ့၂၁ ရက်နေ့ မှာဘဲ သူ မ ၁၀ လ သာသာလေး အလည်လာရတဲ့ ဒီလောကကြီးမှ ထာဝရ ထွက်ခွာသွားခဲ့ ရပါတယ် ။
ကလေး အဖေ ကိုတော့ တရားဥပဒေအရ အရေးယူဖို့အခင်းဖြစ်တဲ့ နေ့ ကတည်းက ဖမ်းချုပ်ထားခဲ့ပါပြီ ။
ဒီလို ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ကလေး အမေ မှာရော . . အပြစ်ရှိတယ် လို့ ယူဆ ထားတဲ့ သူတွေလည်း မနည်းလှပါဘူး ။
ဒီအမှုကို လက်ခံထားရတဲ့ရဲစခန်းမှာလဲ ပြည်သူတွေက ဖုံးဆက် သတင်းမေးကြ ။ လူသတ် သမား ကလေးအဖေကို ဆဲဆို အပြစ်တင်ကြ နဲ့ဖုံးပြန်ဖြေရတဲ့ ရဲတွေလည်း မနားကြရပါဘူး တဲ့ ။
အရက် နဲ့ဒေါသ ...လူစိတ်စဉ်းစားဥာဏ် ဆင်ခြင်စိတ် တွေကိုပျောက်စေတာ ... ကိုယ့်သားသမီး အရင်းခေါက်ခေါက်ကိုတောင် ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ရဲတတ်ကြပါတယ် ။
ဒီလို လူစိတ်ပျောက်နေတဲ့ ၊ လူမဆန်တဲ့မိဘ လက်ထဲမှ လွတ်မြောက်ပြီး ။ မတန်တဆခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေ မှ လွတ်ကင်းသွားတဲ့၁၀ လ သမီးလေး 黃小妹။ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ။ တကယ်လို့ လူ့ ဘဝကို တခါ ပြန်ရမယ်ဆိုရင် လည်း လူမဆန်တဲ့လူ တွေ နဲ့ ကင်းရှင်းတဲ့ဘဝလေးကို ရောက်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
:kiki : at 4/22/2009 02:34:00 AM
မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ရက်နေ့၊ ၁၃၇၁ တန်ခူးလဆန်း၁ရက်နေ့၊ ကမ္ဘာလူသားအားလုံး အေးချမ်းကြပါစေ ၊ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ ။ ကမ္ဘာမြေကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ ။ အနီးကပ်နေတဲ့ ရခိုင် ကမ်းရိုးတန်းမှာ ကျရောက်နိုင်တဲ့မုန်တိုင်းသတင်းတွေရော ၊ ဂျွန်လ ၂၂ မှာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆူနာမီ သတင်းတွေရော ကြားရတာ စိတ်ထဲ တထင့်ထင့်နဲ့။ လူအများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးအောင် ဆုတောင်းပေးရုံမှ လွဲလို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှ မတတ်နိုင်သေးပါဘူး ။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေ တတ်နိုင်သလောက်နည်းအောင်တော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ အရာလေးတွေတော့ ရှိနေတယ်လေ ။
မုန်တိုင်းလာမဲ့ ဒေသမှ လူထုတွေကို အချိန်မှီ ကြိုတင် အသိပေး ပြီး ။ဘေးလွတ်ရာကို ရွှေ့ ပြောင်းပေးနိုင်ရင် ပြီးခဲ့တဲ့ နာဂစ် ကလို ကြေကွဲစရာတွေ ထပ်မံ မဖြစ်ကြရလေအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အသိတရား အမှန်အကန်လေးတွေကို သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးဆိုတဲ့ လူများ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတဲ့ တာဝန်ရှိသူများ သတိရ ၊ အမြင်မှန်ရအောင် ၊ သိကြားမင်း ပြန် မတက်ခင်မှာ warning ပေးခဲ့တယ်တဲ့( မနေ့ ညက မက်တဲ့အိမ်မက်ပါ။ တကယ်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နေမှာပါ ) ။ ဒီတော့ တတ်နိုင်သမျှ .တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ကောင်းမှုလေး လုပ်ပြီး အားလုံးအတွက် မေတ္တာပို့အမျှဝေပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ ကမ္ဘာလူသားအားလုံး အေးချမ်းကြပါစေ ၊ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ ။ ကမ္ဘာမြေကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ ။
မနေ့ က ဥပုသ်စောင့် လို့ဒီနေ့ မှ နှစ်သစ်မင်္ဂလာဆုတောင်းပေးရတာ ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါရန် အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
( ပဟေဋိလေးတခု အဖြေညှိပေးကြပါအုံးနော် ။
ဥပုသ်စောင့်သီလယူထားသူတယောက်ဟာ online မတက်ရဘူး ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ။ ဘုရားလက်ထက်က ဒီ ကွန်ပူတာတွေ မရှိသေးတော့ ဘယ်လို ပညက်ချက်ထားခဲ့ သလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ် ။ မနေ့ က ပို့ စ်တင်ချင်တာ ။ online တက်မိလို့အဆူခံရလို့စိတ်ထဲ ဇဝေ ဇဝါ ဖြစ်နေပါတယ် ။ သိတဲ့ လူများ ပြောပြကြစေလိုပါတယ် ။)
:kiki : at 4/18/2009 09:40:00 AM
့အင်း ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ သိကြားမင်းက ဂဠုန် စီးပြီး သံလျှက်ကိုင်ကာ လူ့ ပြည်ဆင်းမယ်ဆိုလို့ဂဠုန်အုပ်စုတွေ အနှစ် နှစ်ဆယ်နီးပါး အိပ်စက်အနားယူနေရာမှ အကြိုတော်တပ်ဖွဲ့ ကို ခါတော်မီ ကမန်းကတန်း ဖြစ်သလို ဖွဲ့ ပြီးသကာလ သံလျှက်စွန်းမှနေ၍ တဟီးဟီးထအောင်ကြီးမားခန်းနားလှတဲ့ရွာအဝင် မုဋ်ဦးကြီး ကို ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ပြီး အရှင်သကြားမင်းအလာကိုကြိုဆိုဖို့.. ခု ရွာထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဗရုတ် ဒုက္ခတွေကို အရှင်သကြား မမြင်အောင်ဖုံးကွယိဖို့အမျိုးမျိုး ကြိုးစား ပြုပြင်နေကြပါတယ် ။
ဆင်သေကို ဖုံးဖို့ ရာကလည်း ရွာအတွင်းမှာ ရှိသမျှ ဆိတ်တွေ အားလုံး မသတ်မနေရ တဲ့ ။ ဆိတ်ရေခွံတွေ ခွာယူ ဖို့ ရာ မဟာ စီမံချက် ကြီးချမှတ် လိုက်လို့နို့ ညှစ်စားနေတဲ့ ဆိတ်ပိုင်ရှင် ကိုကုလားတို့ တဝိုင်းလုံးလည်း ဆိတ်ချမ်းသာခြင်း ကင်းမဲ့ နေကြရပါပြီ။
ဒါ့ အပြင် ရွာတင်မက ကမ္ဘာနဲ့တောင် ယှဉ်ပြီး ဗမာ့မီဒီယာတွေ အကျိုး မျှော်ကိုးပေးပြီး အဆင့်မှီ အဆင့်မြင့် အင်တာနက်စနစ်ကို ရွာလူထု နဲ့ ကမ္ဘာအကြားပေါင်းကူးတံတားကြီးတခု တည်ဆောက်ပေးမလို့ ပါတဲ့ ။မယုံရင် ပုံပြင်လို့သာမှတ်ကြပါ ။
ဒီပုံပြင်တွေကလည်း ကြားရပေါင်းများလို့ဒို့ ရွာသားတွေလည်း ရိုးအီနေကြပါပြီလေ ။ Remix တွေ
အတင်းညာတဲ့ သတင်းစာကလည်း တမှောင့် ..
၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ မှစတင်ပြီး ခေတ်မှီ ဖိုင်ဘာအော့တစ် နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အင်တာနက်လိုင်းကြိုးတွေ( ရေစိုခံ ဓါတ်လိုက်ခံ၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒါဏ်ခံ၊ကြွက်ကိုက်ခံ ၊ဥတု သုံးပါးခံ၊ ခံနိုင်ရည် အပြည့် ရှိတဲ့ လိုင်းမျိုး) ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးတော့မှာမို့ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရွာသားတွေ ခေတ်မှီတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေ ခံစားရပါမဲ့ အကြောင်း မြန်မာ့တယ်လီပို့ စ်မှ ရဲရဲကြီး ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။
အချိန်တန်တော့ နပိန်တင်မက နပါးမဝတဝတွေတောင်ကန်နေကြပြီ .(ဘော်လုံးရာသီတောင်မဟုတ်သေးဘူး )
အရာရာခက်တဲ့အင်တာနက် ၊ ပြင်ရတာလည်း အတော်ခက်တယ်ထင်ပါ့။သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိုင်းမပြီးနိုင်တော့ ဘာဖြစ်သတုန်း ။
ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ။ နောက် ဖက် ၅ ရက်ရွှေ့ လိုက်ရုံပေါ့ ။ ဘာခက်တာမှတ်လို့ ။ သတင်းဆိုတာ ငါ့ပါးစပ် ၊ငါ့လက်နဲ့ ငါ့့စက်ကထွက်တာဘဲလေ ။ ၅ ရက်နေ့ လည်းမပြီးသေး ။ ဒီတခါတော့ ခပ်ခွာခွာလေး ချိန်းလိုက်မယ် ။ကဲ ၁၇ ရက်နေ့ ပါတဲ့ ။ လူရယ်စရာ သတင်းစာနဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာန ။
[ ပြီးပါတော့မယ် ၊ ဒီနေ့ ရမှာပါ ။ ဟိုနေ့ ကျသေချာပြီးပါမယ် ။ ပြီးချင်မှလည်း ပြီးပါမယ် ၊ ကောင်းချင်မှလည်းကောင်းပါမယ်။ နောက်ဆုံးရ သတင်းများကိုလည်း ဆက်လက် ကြေညာ သွားပါမယ် ။
ပုံ / မြန်မာ့တယ်လီပို့ စ် ]
ဒါကြောင့်ပြောပါတယ် ။ ကဗျာလေးတွေ မစပ်ဘဲ မနေနိုင်ကြပါဘူး ။ ရွာသားတွေဘဲလေ ။ သိတယ်ဟုတ် ။
(လိမ်တယ် ညာတယ် ပုဂံနက် (Bagan Net ) ရယ် ။ ယုံအောင် ဖြီးတတ်တယ် ။ ကွန်နက်ရှင်ကို ရမယ်ပြောပြီး အချိန်ဆွဲလို့ ရယ်) ...
သင်္ကြန်မှီ တူးပို့ရိုက်စား သီချင်းခွေထဲတောင် ကော်ပီလုပ်ပြီးသွားပါပြီ ။ အော်ရီဂျင်နယ် ခွေမထွက်ခင်မှာတောင် ကော်ပီခွေတွေ ထွက်နိုင်ကြတာ ၊ လူတွေ ဒီ အီးခေတ်ထဲ မှာ နေလို့ ပျော်တဲ့ အကြောင်းရင်းတခု နေမှာပေါ့ ။ အီးပစ္စည်းတွေလည်း အံ့ မခန်း ၊ ဒီစနစ် နဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဒီလူတွေနဲ့ လိုက်လည်း လိုက်ဖက်ပါပေတယ် ။ ရွာသားတွေ ရဲ့လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်ကြပုံ နဲ့ သည်းခံခြင်း တရားများ ဟာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ စံနမူနာ ယူလောက်စရာပါဘဲလေ ။
မငြိမ်မသက် ထကြွသောင်းကျန်းနေတဲ့ အလစ်သမား ၊ သူခိုး၊ ဓါးပြ ၊ ပြန်ပေး ၊လူသတ် ရာဇဝတ်မှုတွေ ဒလစပ် ကျူးကျော်ရမ်းကား နေတဲ့ ငမိုက်သားတို့ ကို ဆုံးမဖို့ အချိန်ကျလို့ သံလျှက်တော်ကိုင်ကာ ဆင်းလာမည့်အရှင်သိကြားမင်းကြွရောက်လာမဲ့ နေ့ ရက်အချိန် အတိအကျကို မြန်မာတယ်လီပို့စ် မှ တဆင့်အီးမေးလ်ပို့ကာ အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သဖြင့် သိကြားမင်းရှေ့ ပြေးအဖွဲ့ မှ့ချက်ကင်( Checking) မလုပ်တော့ဘဲ၊ စိတ်ချလက်ချ ဖြင့် ၊ မြို့ ပြင်တနေရာ က ဆိုက်ဘာ ဆိုင်ကြီးမှာ ချက်တင်တွေ လာထိုင်နေကြပြီး နတ်ပြည်မှာ
ကျန်နေခဲ့ တဲ့သုဇိတာ နတ် သမီးရဲ့ အပျိုတော်လေးများနဲ့နေ့ မအိပ် ညမအိပ် နတ်ဇာတ်ခင်းနေကြသေးရဲ့ လေ ။
ကွန်နက်ရှင်က တက်လိုက် ကျလိုက်ဆိုတော့ ဆန့် တငင်ငင် နဲ့ နတ်ချက်တင် ကို ရှေ့ ပြေး နတ်အဖွဲ့ က ညိုညင်စ ပြုနေပါပြီ ။
တနေ့ ကောင်းနိုး ။တရက်ကောင်းနိူးနဲ့လူ့ဗြမ္မာပြည် (အဲ..ဗမာပြည်) က လဒတွေရဲ့ ပေါက်ကရ ရှစ်ဆယ် ကြေညာချက် တွေကိုအကြောင်းမသိသေးတဲ့နတ်ရှေ့ ပြေး လေးတွေ အယုံကြီးယုံလို့အပုံကြီးပုံအပ်မိခဲ့ တာ ။ ကိုးနတ်ရှင် အတက်အကျ တွေကြောင့် အပ် ပ် တူ ဒိတ် သတင်းများကို နတ်ပြည်သို့မပို့ နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေ ။
ခရစ် သက္ကရဇ် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၂ရက်နေ့ ( မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၀ တန်ခူးလဆုတ် ၅ ရက် ) မဟာ သင်္ကြန်အကျနေ့့ရောက်ရှိလာပြီးသကာလ ။အလွဲလွဲ အချော်ချော်တော့ ဖြစ်ကုန်ကြပါပြီ ။
အရှင်သိကြားမင်းရဲ့ရွာဝင်ခွင့် ဗီဇာ အချိန်မှီ မကျလာနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့။ ဗီဇာကို ဟို နပြည်ဒေါ်မှာ ဝံကြီး ကိုယ်တိုင်နှိပ်ပေးမှ ရတဲ့စနစ်သစ်ကြောင့် ရယ် ။ရွာကို ဆင်းဖို့ ရာ သန်လျှက်စွန်းဂိတ်သို့ဒါရိုက်ဖလိုက်လဲ မရှိတဲ့ အတွက် ရွာနီးနားချင်းမှ တဆင့် ထရန်စစ်နဲ့လာရမှာ အဲဒီရွာနီးချင်းက ရွာသား အချင်းချင်း ဒုတ်တပြက် ဒါးတပြက်နဲ့ရွာသူကြီးလည်း လက်မှိုင်ချနေရတဲ့ အချိန့် ဖြစ်နေတာရယ် ၊ ကြောင့် ပါတဲ့ ။
ဒီတော့ ဒီတော့ ဒီနှစ် ရဲ့ မဟာသင်္ကြန်မှာ ရှေးစဉ်ဆက်တည်းက အကျနေ့ မှာ လူ့ ပြည်ဆင်း နေကျသိကြားမင်းကြီးလည်း
မြန်မာတယ်လီပို့ စ်ရဲ့ ပြင်လွန်းဖင်ချွန်းမှုများကြောင့် လွဲချော်မှုများ ကြောင့် အချိန်မီ မလာရောက်နိုင်တော့ကြောင်းပါ ။
ကလင်.. ကလင် ..ကလင် .. ကလင် ..ကလင်
အန်...ဘာသံပါလိမ့် ...သြော် ဒီနာရီ နှိုးစက်ကလည်း တမှောင့် စောစောစီးစီး ...နှပ်နေတာလေး ..ဇိမ်ပျက်လိုက်တာ
သကြားမင်း ကို ဘယ်ပုံနဲ့ ဆင်းလာမလဲလို့ စောင့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားလို့ ။ သင်္ကြန်ရက်တွေအတွင်း အထူးတလည် လွမ်းမိနေတဲ့ ရွှေပြည်မြန်မာ မှာ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ အချိန်မှစပြီး အင်တာနက်တွေ ပြန်ကောင်းတော့မယ်လို့ လွှင့်ထားတဲ့သတင်းလေးကို မယုံ့ တယုံ စောင့်စားနေမိရင်း စိတ်စွဲလို့ မက်တဲ့ အိပ်မက်ကလေး တခု ။ အင်း ဒါကအိပ်မက်ပါဘဲလေ ။ သိကြားမင်းဆိုတာ ဗီဇာမှ မလိုတာနော် ။
အင်တာနက်နဲ့ ဆက်သွယ်စရာလည်း မလိုပါဘူး ။ ဒီတော့ ခုချိန်မှာ လူ့ ပြည်ဆင်းနေပါပြီ ။
ခွေးသားရေချပ်မှာ ဒီတနှစ် အတွက် နာမယ် အတပ် မခံရအောင် မဟုတ်တရုပ်လုပ်ထားကြသူများ သတိထားနေကြပါ..
နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်တွေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်အသစ်များ ပုံဖေါ်နိူင်ကြပါစေ ။ (လူကတော့ အဟောင်းအတိုင်းဘဲပေါ့ ။ဒါပေမဲ့ စိတ်ပျို ကိုယ်နုလေ) ။ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး ဘေးဘယာ ကင်းကွာကာ အေးချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ ။
:kiki : at 4/15/2009 09:45:00 AM
၂၀၀၉ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့။ထိုင်ပေ ၊ကျုံးဟိုမြို့ မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ပွဲမှာ မြို့ တော်ဝန်လဲ ပါဝင်ပြီး မြို့ နယ်သားများနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ရေကစားနေကြတဲ့ ပုံလေးပါ ။
၂၀၀၉ - `ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့- ထိုင်ဝမ်မှာပြုလုပ်တဲ့သင်္ကြန်ပွဲ၌ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာပါဝ င်တဲ့ ကချင်၊လီဆူး၊ လီရှော။အခါ လူမျိုးစုတို့ ၏ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု
ဒါကတော့ ရေပန်းတွေအောက်မှာ မြို့ နယ်ရပ်ကွက်မှလူတွေ သင်္ကြန်ရေ အဖျန်းခံပြီး ဆော့ကစားနေကြပုံတွေပါ..
:kiki : at 4/14/2009 01:00:00 AM
ဒီနှစ်အတွင်း ၂ပတ်ဆက်တိုက်လုပ်တဲ့ မြန်မာအတာရေသင်္ကြန်ပွဲ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေ မဆင်နွှဲလိုက်ရတဲ့သူတွေ အတွက်လားတော့မသိပါ ။လမ်းလေးနဲနဲပိုကျယ်တဲ့နေရာ .ကျုံးဟို MRT ဂိတ်အစ ရှိတဲ့နေရာမှာ ထပ်ကျင်းပတယ် ၊ ဗုဒ္ဓ ဆင်းတု ၊ ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီး ၃ပါး ၊ မြို့ တော်ဝန် ၊ တိုင်းရင်းရိုးရာအကများ ၊ခေတ်ပေါ်တေးဂီတ ၊ ရေကစားကြသူများ နဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။ အမိမြေ အလွမ်းပြေ ပါ ။
:kiki : at 4/13/2009 12:55:00 PM
အရှေ့ ကိုသွား အနောက်သို့ လား ကမ္ဘာအနှံ့ ခြေဆန့် ခဲ့ ရ
ဦးစွာပထမ ရောက်တဲ့ဆိပ်တိုင်း ဒီလောက်ရင်ထိတ် တဒိတ်ဒိတ်မျှဖြစ်ခဲ့ဘူးပ
လူမှုကြီးကြပ် ဘယ်လိုဖြတ်ဖြတ် မဟုတ်မဟပ် မလုပ်တတ်လို့ 
ရင်မမောဘဲ အဆင်ချောစွာ ကမ္ဘာပတ်တာ ခါးပတ်မပါပေမဲ့
ချိန်ခါမလင့် အဆင်သင့်စွာ လိုရာခရီး ရောက်စမြဲမို့ခက်ခဲတယ်လို့ မထင်ရ ။
ကိုယ့် ပြည်တော်အမှန် ကိုယ့်အိမ်ပြန်တော့
ကြည်လင်ရွှင်ပြ အစ ပထမ လေယာဉ်ပေါ်တက် ပျော်ရွှင်သက်သက်
လေးနာရီကြာစီးလာပေမဲ့လေးကမ္ဘာလို့ထင်မှတ်မှားခဲ့
ရင်ဘတ်နားသို့အပျော်လုံးဆို့နေရသဗျို့ ။
ဟော.. ရောက်လာပြီပေါ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်
ဘယ်ပုံမှာ ခွေအိပ်နေမလဲလို့ဝေဟင်ပေါ်မှ မျှော်ကာရှာရ
မဆင်းခင်လေးမှာ အဝေးကမြင် ရွှေအဆင်နဲ့မုဒ်ဦးသွင်တော့ ထူးပါ၏။
ယခင်ခါက လေယာဉ်အဆင်း ထိုခြေနင်းမှ
ဂျုံးဂျိမ်းသံနဲ့ လက်တွန်းလှေခါး ခုတော့ထူးခြားသွားပါပေါ့လား
ကျု(ပ်) tube တံခါးလေးနဲ့ နော့ အမယ် ..အဆင့်မှီပါရော့လား ။
အရင်တုံးက လေယာဉ်မှဆင်းချင်း လေပူပြင်းပြင်း မွှေနှောင်ခြင်းခံရတဲ့
ပူစပ်ပူလောင် ဝေဒနာလည်း သူမတူအောင် မကလူတော့ပါလား ၊
တအားများတဲ့ အဲယားကွန်းများနဲ့အခန့် သားထိုင်နေကြတဲ့ လဝကရဲ့မမများ
အအေးကြောက် သမို့ဘေးဆံတောက်တောင်မကျန်
စတိုင်အပြည့် အမှန်နဲ့ယူနီဖေါင်းတောင် မမြင်ရအောင် ဝတ်ထားကြတာ
တက်ကနီကာလာ မညီညာတဲ့ ပုံစံအစုံ ထိုဝတ်ရုံများ ။
ခေတ်အလိုက်တိုးတက် ဘာသာစုံနဲ့ နှုတ်ဆက် ကြသေး ၊ နီဟောင်မား နဲ့ ရှဲ့ ရှဲ့ တဲ့လေး။
လူဝင်ကြီးကြပ် ဖြတ်တဲ့အချိန် ၊ ထူးစွာမှတ်မိ တဦးမှာ ကွန်ပြူတာနဲ့ စာရင်းသွင်း
ဒါနဲ့ တင်မပြီးသေး နောက်တယောက်ဘေးက ဘုတ်အုတ်လေးမှာ ရေးမှတ်ရလေခြင်း ၊
ဘယ်ဒင်း ဘယ်ဝါ ဘယ်နေရာလာလို့ဘယ်မှာတည်း
စုံစီနဖါ မှတ်ရမြဲနဲ့ဒီကလဲ( Declare ) လုပ်တဲ့ စာရွက်လည်း
ဟိုဖြဲ ဒီဖြဲ ဟိုညပ်ဒီညပ် ရှုတ်ရှက်ခပ်ရ ။
အနီရောင်စာအုပ်ကိုင်ဝင်ရင်တော့ ၊ ဂဂျီဂဂျောင်ကျတာ မှိုင်ပေရော့ပေါ့ ။
လပ်ဂ်ဂျေ့ ကလိမ်း (luggage claim) ကိုယ့်ပစ္စည်းသိမ်းဖို့ 
မတိမ်းမစောင်း တရောင်း(round) ထဲနဲ့ အပြီးပေါင်းတဲ့ 
လေဆိပ်အကြို ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာလဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။
မလည်ဝယ်သူများ သူတို့ နဲ့ အပြီးအပ်က ပစိပစပ်မများ
အနီးတောင် မကပ်ဘဲ ကပ်စတန်( Custom) လည်း ရှောင်လွတ်တယ်တဲ့ ။
ကံမကောင်းက ဟိုခေါင်းစိမ်းမှ ဘဝပြောင်းမည် အက်ဖ်အီးစီ တဲ့ ၊
စာမတတ်က ကြက်ခြေခတ်တဲ့ ၊ကိုယ့်အိတ်ပေါ်တွင် ခြစ်ခံရစဉ်
ဘာကြောင့်လဲလို့မသိလိုက်ခင်မှာဘဲ ဒီအိတ်ကလေး ခဏဖွင့်ပေးပါတဲ့ ၊
မွှေနှောက်ကာရှာပါသနော် ၊ပေါ်လာတာတွေက အဖေါ်အမျိုးတွေအတွက်
အီလက်ထရောနစ် မဖြစ်တဖြစ် ချစ်လက်ဆောင်များ
မှန်ကန်စွာပြောတဲ့စကားကို ဟိုအပျို ဒီအကိုတွေက မယုံကြပေဘူး၊
အဖိုးမတန်ပေမဲ့သူခိုးကြံ ကြံလို့ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာခွန် ဆက်သပါမှ
ဤနေရာက ခွာရမယ်တဲ့ လေး။
ဪ..ကိုယ့်ရွာပြန်ရ ဒီဒုက္ခတွေ ကြုံရပေမဲ့ 
ပျိုခင်ကညာနဲ့ဆုံချင်ပါတဲ့ အူတူတူ ဒီလူတယောက်မှာတော့
ရွာအဝင် ဒီပုံပြင်တွေကို ခုံမင်ပါလို့ 
မကြာခင်မှာ တခါတင်မက ပြန်ချင်လှပါပေါ့ မနှေး။
(ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်ရွာ ပြန်တဲ့အခေါက်တိုင်း ခံစားမိခဲ့ရတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ အတွေ့ အကြုံလေးများစွာကို စုပေါင်းပြီးတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ ၄လလောက်က နောက်ဆုံးတခေါက်ပြန်ခဲ့ စဉ်မှာတော့ အတော်လေးကို ပြောင်းလဲနေပါပြီ ။ ဘာမှ အရစ်မခံ အစစ်မခံရဘဲ လျှောလျှောလျှုလျှု ပေါ့) . :))
ခုလို နှစ်သစ်အကူး အခါသမယမှာ အမိပြည်တော်ဆီသို့ကြွမြန်းကြသူများအားလုံးအတွက် ရွာအဝင်ဂိတ်မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျှက်....
အပေါ်က ပုံလေးတွေကို google search မှ ရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်
:kiki : at 4/11/2009 02:43:00 PM